hafanana Archives - SmartMe
Tag Archives: manafana
Dom » Entina notsongaina miaraka amin'ny "hafanana"
Smart Home Mey 2021 - Xiaomi, HeatIt, Aqara, Puron
Fotoana izao ho an'ny tapany faharoa amin'ny unboxing an'ny Smart Home! Inona no miandry antsika amin'ity indray mitoraka ity?!
Heatit Z-DIM [Famerenana horonantsary]
Fibaro, heatit, Z-Dim, Z-onja
Androany izahay dia manadihady ny maizina ho anao! Heatit Z-DIM izany. Fitaovana marani-tsaina iray hafa izay tokony ho tonga any an-tranon'ny mpankafy mahira-tsaina rehetra;) Toa tsotra be, nefa faly
Z-Dim avy amin'ny Heatit - famerenana ny dimmer marani-tsaina
manjavozavo, heatit, dimmer, Z-Dim
Ny jiro ao an-tranontsika hendry dia mangataka fifehezana tsara kokoa noho ny famonoana azy fotsiny sy famonoana azy. Ny fametrahana ny famirapiratana na ny famonoana ho azy dia mitondra fiononana lehibe. Z-Dim avy amin'ny Heatit dia afaka manampy. Fananganana ...
Heatit Z-Temp2 thermostat [Famerenana horonantsary]
27 Septambra 2020
heatit, mahay indrindra, thermostat, Z-temp2
Ity no thermostat voalohany andrana ary azoko apetraka eo ambony latabatra izany. Inona no mahasamihafa ny Heatit Z-Temp2 amin'ireo thermostat hafa rehetra? Miseho amin'ny horonantsary androany aho!
Z-Temp2 avy amin'ny Heatit - famerenana thermostat marani-tsaina
11 Septambra 2020
fiakaran'ny maripanan'ny, heatit, mahay indrindra, thermostat
Ny iray amin'ireo fampitaovana fototra azon'ny teknolojia maoderina omena antsika ao an-trano dia ny mety hisian'ny fifehezana fanafanana mety. Tsy mila mifehy tanana ny valves amin'ny rano ianao hametrahana ny mari-pana "amin'ny maso". Ampiasao fotsiny ny termostat ...
Tontonana rindrina - famerenam-bokotra Heatit Z-Push 8
30 Jolay 2020
heatit, tontonana, mpanamory, bokotra, Z-manosika
Tsara raha afaka mifehy asa maro avy amin'ny toerana iray, dia ilaina tokoa ny "trano fitsaboana". Raha ny fandehany fa tsy mila midika takelaka lafo vidy sy lehibe eo am-baravarankely misy olana ny fiampangana matetika. Afaka mampiasa ...
Smart Thermostat Heatit Z-TRM3 - Famerenana video
21 Jolay 2020
heatit, mahay indrindra, ny-trm3
Izahay dia misy horonantsary hafa ho anao! Amin'ity famerenana video ity dia hasehontsika anao ny smart indrindra Thermostat Heatit Z-TRM3. Ahoana no nataony? Ny zava-drehetra amin'ny sarimihetsika: D
Hafanana thermostat - famerenana ny thermostat aorian'ny Z-Wave
26 Jolay 2020
heatit, openhab, thermostat
Fantatrao ve ny zavatra manenina be loatra ao an-tranoko? Nanapa-kevitra aho herintaona lasa izay fa tsy mila thermostat mahay aho. Ampy ny nomerika, sa tsy izany? Eny ary, indrisy tsy ... Soa ihany fa nahazo fitaovana marobe avy amin'ny fivarotana Z-Home aho, tao ...